Gaming Change Persons Ary Booth Cashiers Job Description / Asa sy Andraikitry Template - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Gaming Change Persons Ary Booth Cashiers Job Description / Asa sy Andraikitry Template
Jacob Jona 28, 2016 Uncategorized 7 Comments 1,707 Views
Exchange vola, famantarana, ary poti for customersA dolara. Mety hamoaka mahazo ny sonia ny mpividy ao amin'ny volavolan-dalàna sy ny payoffs. Mety manisa sy vola hetra amin'ny mpantsaka, na miasa iray ao amin'ny slot cubicle toerana milina manome vola sy banky manova ry namana hatrany am-piandohana ny hetsika.
Miankina vola dolara sy ny hetra mpantsaka.
Mety tsara foana firaketana an-tsoratra ny vidin reconciliations, nahazo alalana karazany, sy ny fifanakalozana ara-ketra.
Swap bola, sy ny Casino poti, ary mamorona zatra ho an'ny mpividy.
Henoy ny mpandresy ho lakolosy fanairana jackpot sy ny olana payoffs.
Ataovy tarehy ho azy manokana ny fiarovana araka ny fitsipika.
Miverina ho isan'andro famintinana ny efaha amin'ny fitoniana boky sy gazety.
Workin slot-milina izay azo jerena sy hijerena ny faritra izay voatendry eo amin'ny Casino tany.
Miezaha hanana clientsA sonia ny rosia rehefa payout mihoatra lavitra noho ny tontalin'ny amin'ny slot-milina.
Tolotra lalao poti, tapakila ny mpitsidika hafa ho an'ny mpiasa mivarotra, na ny mpitsidika, na ny famantarana.
Fantaro ireo mpandray anjara nahazo na very maina ny fatokisantsika ny amin'ny fahamendrehan'ny ny poti-.
Hampahamendrika ny vola-banky hatrany am-piandohana ny tsirairay mba hanova ny famindrana ny olona.
Raiso bola fampiharana sy andinin-tsoratra masina mba hanamarina bola hanome handinika-cashing fanekena na mba hanorina trano bola kaonty.
Manaova toy ny ohatra manamarina vola fifamoivoizana, fanamboarana kely ny slotmachines.
Mikatsaka Career Tsy maintsy
Fahazoanao ny hevitr'izay vakinao-Tsy Mahalala Tsara nanomana fehezanteny sy ny andalana ao amin'ny asa mifandraika amin'ny antontan-taratasy.
Fahaiza-mihaino-manome feno eritreritra momba an 'ny zavatra hafa ny olona hoe:, mahazo fotoana mba hahatakatra ny antony satria tonga, mangataka olana toy ny marina, ary tsy mesmerizing amin'ny fotoana izay tsy azo ekena.
Publishing-On taratasy raha ilaina ny fepetra takiana ny vahoaka miteny soa aman-tsara.
Raha niresaka-firesahana amin'ny hafa mba hampitana fanazavana mahomby.
Science-maso ny fampiasana vahaolana sy fitsipika mba handaminana zava-manahirana.
Nihevitra izay mitsikera-Mampihatra antony sy ny antony mba hamantatra ny tombontsoa sy ny fatiantoka ny vokatra, Alternate fomba hafa na ny fomba ny fahoriana.
Active ny Fianarana-tena azony ny dikany fanazavana vaovao momba tsirairay ankehitriny sy ho avy famahana olana sy ny fanapahan-kevitra.
Ny fianarana sy ny fomba-ny fifidianana trainingORinstructional mampiasa fomba mandray ny mety ho ny toe-draharaha, rehefa mianatra na mampianatra hevitra izay vaovao.
Nanamarina-maso / Nahita fahombiazan'ny tena, ry namana izay fanampiny, na orinasa mba hanao enhancements na handinika remedial dingana.
Social fidirana-Ny hoe mahalala ny hafa’ fihetseham-po mahatonga azy ireo satria mamaly sy tena azony.
Control-Manitsy fihetsika eo amin'ny lafiny dingana othersI.
Fandresen-dahatra-mandresy lahatra ny hafa mba hanatsarana ny fitondran-tena, na ny intellects.
Settlement-Fandraisana ny hafa miaraka sy mitady ny hampihavana fiovana.
Mampianatra-HOWTO fampianarana ny hafa manao hetsika.
Service Orientation-tsara mitady paikady mba hanampiana ny olona.
Famahana Olana-Advanced-mamaritra Miteraka mandroso sy nandinika Info izay mifandraika mamantatra sy hanorina ny safidy sy hampihatra vahaolana.
Asa Evaluation-nanara-maso sy ny vahaolana mila zavatra takiana alohan'ny hamoronana fomba.
Teknolojia Design-Teknolojia hiasa tsirairay sy ny fametrahana fitaovana na niteraka faniriana.
Andian-fametrahana fitaovana, milina, wiring, na ny fandaharana mba hihaona endri-javatra amin'ny ankapobeny.
Programming-Manoratra solosaina fonosana ho an'ny tanjona isan-karazany.
Fanaraha-maso Operation-Viewing kiboriny, fanombanana, na samy hafa mba hahazoana antoka famantarana ny fitaovana dia miasa araka ny tokony ho.
Fampandehanana sy hitantana-Fisakanana ilay asa ny vokatra na ny rafitra.
Maintenance-Manatanteraka fikojakojana izay fahazarana eo amin'ny vokatra sy mamaritra rehefa ary inona no karazana fikojakojana lasa ilaina.
Fanamboarana-fanapahan-kevitra antony fandidiana Fahadisoana sy ny fisafidianana toy 'zao momba izany na dia iray akory.
Indray-manamboatra fitaovana na fomba mampiasa ny fitaovana izay ilaina.
Quality Control Rehefa nandinika-Nanao fanaovana fitiliana sy ny fisafoana ny entana, tolotra, na ny fomba hanombanana kalitao na ny fahombiazan'ny.
View sy ny Decisionmaking-fandinihana ny mampitaha vidin-javatra sy ny tombontsoa amin'ny asa izay mety hisafidy ny tsara indrindra iray.
Analysis-Fantatra fa tena fanatsarana ao amin'ny toerana, asa, ary ny toe-piainana hisy vokany eo amin'ny vokatra ary inona no karazana teknika dia tokony hanatanteraka.
Fomba Analysis-Famantarana fomba na ny famantarana ny fampisehoana miaraka amin'ny tsara na ny asa ilaina mba hanatanjahana miasa, mikasika ny tanjona ny rafitra.
Timemanagement-Fandaminana indray ny fotoana manokana, ary koa ny olon-kafa’ fe-potoana.
Asa ny Vola-manapa-kevitra ny fomba dia vola dolara mba hahazoana ny asa vita, ary nampamoahana an'i ireo vola lany.
Asa ny Fidorohana Resources-Mandray sy mahita tsara indrindra manoloana ny fampiasana ny fitaovana asa, sy ny singa fitaovana ilaina hanao asa manokana.
Asa ny mpiasa Resources-mandrisika, fampandrosoana, ary mikendry ry namana rehefa miasa, pinpointing ny olona ambony ho an'ny asa.
Fepetra fanabeazana Experience Fepetra
Senior High School Degree (na GED na Senior School Equivalence Certificate)
Tsy ampy-noho ny High School Diploma
Maro School Programs
Task Management Skills Fepetra
tapa-kevitra – 87.05%
Fiezahana – 87.08%
Manahy ny hafa – 88.32%
Social Fanitsiana – 86.73%
Fahafehezan-tena – 92.31%
Pressure tokonam-baravarana – 89.33%
azo itokisana – 93.58%
Fanentanana ny Details – 91.95%
azo itokisana – 88.67%
mandroso – 86.97%
poto-fisainana – 87.80%
February 7, 2019 amin'ny 8:11 PM
Mey 2, 2019 amin'ny 10:05 PM